देश संघीयतामा जाने भएसँगै केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने, हेर्नुहोस् कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिदै छन् ? – Nepal Parikrama
देश संघीयतामा जाने भएसँगै केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने, हेर्नुहोस् कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिदै छन् ?
देश संघीयतामा जाने भएसँगै ठूला भनिएका मन्त्रालय नरहने भएका छन् । जसअनुसार स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु नरहने भएका हुन् । काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएपनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको छ ।
जस अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार भएको छ । प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शान्ति मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि शान्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गर्न बाँकी कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा स्थापना गरी त्यही महाशाखाले काम गर्नेछ । प्रस्ताव अनुसार हालको अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसपछि योजना आयोगको सचिवालयले गर्ने काम यही मन्त्रालयले गर्नेछ । गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय भने केन्द्रमा यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने केही नयाँ मन्त्रालयको नाम प्रस्ताव गरिएको छ ।
Published On: ९ चैत्र २०७३, बुधबार २०:२९